မေတ္တာသင်္ဂဟအဖွဲ့အနေနဲ့ သောက်သုံးရေ ရှားပါးတဲ့နေရာတွေမှာ လှူဒါန်းသွားမှာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြော? - Yangon Media Group
မေတ္တာသင်္ဂဟအဖွဲ့အနေနဲ့ သောက်သုံးရေ ရှားပါးတဲ့နေရာတွေမှာ လှူဒါန်းသွားမှာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြော?
မန္တလေးက သောက်သုံးရေရှားပါးတဲ့ ကျေးရွာတွေမှာ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းဖို့အတွက် မေတ္တာသင်္ဂဟအဖွဲ့က ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ အဖွဲ့တည်ထောင်သူ သရုပ်ဆောင်ခန့်စည်သူက ပြောပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ သောက် သုံးရေရှားပါးပြတ်လပ်နေတဲ့ ကျေးရွာတွေကို အဝီစိတွင်းတူးပေးခြင်း၊ ရေလှောင်ကန်ငယ်များဆောက်ပေးခြင်း၊ Compressor များတပ်ဆင် ပေးခြင်းနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အရိပ်ရအပင်တွေ စိုက်ပျိုးပေးခြင်းများ ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
”မန္တလေးမှာ သောက်သုံးရေရှားပါးပြတ်လပ်တဲ့နေရာတွေမှာ ရေတွင်းရေကန်တွေ ဆောက်လုပ်ပေးဖို့အတွက် မေတ္တာသင်္ဂဟအဖွဲ့ အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်ကတော့ အဖွဲ့ ဝင်တွေထဲမှာ အလှူငွေတွေ ကောက်ခံနေပါတယ်။ ဘယ်နေ့လောက် လှူဒါန်းဖြစ်မယ်ဆိုတာကတော့ အခုလောလောဆယ် မပြောနိုင် သေးပါဘူး”လို့ ခန့်စည်သူက ပြောပါတယ်။ မေတ္တာသင်္ဂဟအဖွဲ့ဟာ ဧပြီလထဲမှာလည်း ဗိုလ်တထောင် စေတီတော်အတွင်းမှာရှိတဲ့ မဂ္ဂင်ဓာတုစေတီတော်နဲ့ သြဝါဒပါတိမောက် သိမ်တော်ပြုပြင်မွမ်းမံဖို့အတွက် ငွေကျပ်သိန်း ၁ဝဝ ကိုလည်း လှူ ဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်။
အနုပညာရှင်များစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ မေတ္တာသင်္ဂဟအဖွဲ့ဟာ အနုပညာရှင်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးစရိတ်တွေ၊ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတသဘင်နယ်ပယ်က သက်ကြီးအနုပညာရှင်တွေကို ပူဇော်ကန် တော့ပွဲအတွက် လှူဒါန်းမှုတွေ၊ ဆေးရုံကြီးတွေကို လှူဒါန်းမှုတွေ၊ ရေမရှိတဲ့ နေရာဒေသတွေမှာ ရေတုံကင်တွေ လှူဒါန်းတာတွေ၊ လတ် တလောအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နေရာဒေသတွေမှာ လှူဒါန်းမှု တွေ စတဲ့လှူဒါန်းမှုများစွာကိုပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ မေတ္တာသင်္ဂဟအဖွဲ့ကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မေ ၇ ရက်မှာ စတင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့ပြီး အခုရှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ အမှန်တကယ်လိုအပ် နေတဲ့နေရာ ၆၉ ခုကိုရွေးချယ်ကာ ၆၉ ကြိမ်မြောက်အဖြစ် အလှူငွေ ကျပ် ၂၉၃၈ သိန်းလှူဒါန်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဘိန်းစိုက်မိသားစု သုံးသိန်းခန့်ကို အခြားနည်းဖြင့် ဘဝရပ်တည်နိုင်ရေး လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆ
၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် ပေကျင်းမြို့ တော်သို့ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများ ပိုမိုဝင်ရောက်ခဲ့
”ကူး အတွက် ဒီဇာတ်ကားက ရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့ အားတစ်ခုပါပဲ” သရုပ်ဆောင် ကူကူးဇင်အောင်
Brexit ဖြစ်စဉ်ပြီးနောက် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ၌ ပေါင် ဘီလီယံ ၂ဝ တိုးမြှင့် အသုံးပြုမည်ဟု ဗြိတိန် ဝန်ကြီးခ